Hiran State - News: Ninka sheegta inuu wakiil uga yahay Hiiraan Ahalusuna Aden Cawaale oo shirkii Caabuud waaq dhulka lagu jiiday wafti ka socday isaga.
Ninka sheegta inuu wakiil uga yahay Hiiraan Ahalusuna Aden Cawaale oo shirkii Caabuud waaq dhulka lagu jiiday wafti ka socday isaga.
Dhacdo yaab leh ayaa ka dhacday Caabuud Waaq kedib markii dhawr shaqsi oo wakiil ka ahaa Aden Cawaale oo sida la sheegay ka qeyb galay shir ay gadaal ka riixayaan wadamo dhawr ah oo ka mid ah dowladaha ay ka dagi weysay Somaliya ayaa waji gabax kala kulmay shirka Caabuud Waaq kedib markii la kala garan waayey iney ka yimaadeen Hiiraan iyo iney marti ahaayeen.
Ninka isagu sheegta inuu magaca Ahalusuna wakiil uga yahay Hiiraan dhalinyaro badana ku laayey magacaas isagoo sida xaqiiqadu tahay aan ka warqabin meel ururkaas lagu dhisay iyo ujeedada ka danbeysa Aden Cawaale ayaa hadane dhawr nin oo uu shirka u diray siweyn loogu bahdilay. inkasta oo aanu dooneyn in aanu shacabka waxyaabaha qaarkood u soo bandhigno hadane wararkii oo dhameystiran ayaanu maalmaha soo socda si fah faahsan u soo daabici doonaa.
Arinta aadka uga yaabisay dadka reer Caabuud Waaq ayaa aheyd kedib markii xubnaha golaasi uga qeyb galayo Ahalusuna ee ku galay magaca reer Hiiraan noqdeen shaqsiyaad reer Guriceel ah iyo dhawr nin oo la sheegay iney wakiil ka yahiin amaba metelaan Aden Cawaale.
Waxaa kale oo warku intaasi ku darayaa in dadka isa soo sharaxaya aysan ka mid noqon karin shaqsiyaadka sheegta Ahaluna Hiiraan amaba aysan haweysan karin jagooyinka qarkood sidan gudoomiyaha iyo kuxigeenkiisa laakinse ay codeyn karaan.
Aden Cabdulle Cawaale magaca Ahalusuna ee uu Hiiraan kaka dagalamayo wiilasha uu horboodayana ku laaynayo waxaa jago wasiirnimo ku helay beesha Ceyr wasiirka arimaha gudaha waxaa in leysweydiiyo u baahan isagu shirkaan hada la qabtay maxuu ka yahay? ma isla beeshaasi ayuu madaxweyne sidii ay ku noqon laheyd ayuu Ahalusuna heshiis kula yahay ayey leeyahiin dadka qarkii?
Maalintii marka ay shirka fadhiyaan ayaa shir kale lagu dulqabtaa kedibna iyadoo ajande la wato ayaa la dul dhigaa waxana marka shirka laga soo baxo lagu yiraahdaa meeshii shaleyto lagu dhisay miyaad joogteen maxaad la qeylineysaan iyo wax la mid ah,taasi oo ah jawaabta rasmiga ah ee ay mudan yahiin maadama ay awalba sheeganayeen urur aysan ogeyn meel lagu dhisay iyo ujeedada laga leeyahay.
Mid ka mid ah wafuudii ka socotay Guriceel ayaa laga soo xigtay isagoo leh Ahalusunada gobolada dhexe hadaad maqashaan waa Xeeraale, Caabuud Waaq iyo Guriceel. dabcan qofkasta hadii uu afkiisa kala furo waxii markaasi uu doono ayuu iskaka hadlaa qofkasta wey ogtahay ujeedada ka danbeyso shirka Caabuudwaaq oo ay ku sugan yahiin wadamo African ah oo ay IGAD ugu horeyso. waayaabe hadii wadanka dowlad ka jirto maxaa keenay shirkaan ay goobjooga ka yahiin wadamadan.
Maxaadse kala socotaa ujeedada shirka laga leeyahay.
Ujeedadu waa in Shabaab meesha ka bixi rabto si dowladkasta oo timaada loo soo dhiso iyadoo la hayo mucaarad la isticmaali karo oo iyada loo adeegsada ayaa hada Ahalusuna boorka looga jafayaa.
Dhinaca kale maxuu yahay shirka wadatashiga isaguna ee lagu soo aadiyey xiliga uu soo gabo gaboobayo shirak Ahalusuna?
Shirka wadatashiga ma ahan shirweyn waa mid ku yimid rabitaanka Mahiga waana qandaraas marka hadii inta uu socdo jaanis lagu bedeli karo masuuliyiinta hada jirtana arintaasi miiska ayey saaran tahay. waxaana laga yaabaa hadii uu shirka wadatashiga dhaco iney wax badan isbedelaan sidii shirkii Kampala oo Farmaajo loo heshiiyey in intana maamul goboleedyada iyo Ahalusuna codmuuqda ku yeeshaan kedibna halkaasi loolan siyaasadeed ka dhasho waxkastana laga soo hormariyo waqtigii loogu talo galay sida doorashadii oo sida warar aan la hubin sheegayaan in waqtigii hore laga soo hormarin doono.
Gabo gabadii inkasta oo ay inoo suuro galiweysay in aanu wareysi ka soo qaadno Aden Abdulle Cawaale oo dhalinyarada reer Hiiraan qaarkood siiba kuwa ka soo jeeda Maxaas iyo nawaaxigeeda ku laaya magaca Ahalusa ayaanu warbixin dheer idiinka soo diyaarin doonaa inkasta oo ay adag tahay in aanu helno iyadoo ay horey inoogu suuroobi weysay dhawr jeer oo hore hadane inta uu socdo shirkaan Caabuud Waaq si kastaba waanu isku dayi doonaa.Maahmaah Somaliyeed ayaa waxey leetahay meel ama ka muuqo ama ka maqnaaw. maxaa waayadan danbe magacii reer Hiiraan meelkasta koox daneysta yaal ah la galeen kedibna kula midoobay kooxo aysan garaneyn ujeedada loo dhistay kedibna shirarka marka leyskugu yimaado lagu bahdilay.
La soco wararkeena danbe iyo xaqiiqada shirka Caabuud waaq
· admin on August 25 2011 21:06:36 · 0 Comments · 2010 Reads ·
14,605,791 unique visits